Khariidadaha Google ayaa na soo ogeysiin doona haddii taksiilaha doonayo inuu leexdo | Androidsis
Khariidadaha Google waxay noqdeen aalad aad u wanaagsan oo lagu booqdo meel kasta oo aannaan ka warqabin. Laakiin sanadihii la soo dhaafay, Google wuxuu ku kordhiyay shaqooyin cusub waxaan u isticmaalnaa ficil ahaan maalin kasta, kan ugu dambeeya ayaa noo oggolaanaya muuji xawaaraha aan ku wareegeyno, laakiin kaligeed maahan.
Mid ka mid ah howlaha soo socda ee uu codsigu heli doono, waxaan ka helnaa jidadka aan ku tagsi ahaan ugu tagi karno si joogto ah ama xilliyada qaar. Guurtida tagaasida dhexdeeda, waxaan had iyo jeer la kulannaa qof caqli badan (nasiib wanaag caadi maaha) oo siiya a Leexasho xad dhaaf ah si aan u gaarno halka aan u socono oo markaa aan awoodno in aan lacag badan ka qaado barakaca. Khariidadaha Google oo dhammaaday
Google waxay tijaabineysaa howl cusub oo noo oggolaaneysa inaan si deggan u raaxeysanno markii aan tagsi Taxi ka guureyno Codsiga ayaa noo soo diri doona digniin haddii darawal tagsi uu ka leexdo in ka badan 500 mitir wadada in aan sii wadno inaan gaarno meeshii aan u soconay goor hore Hawshani noo oggolaan mayso oo keliya inaan soo jiidanno dareenka darawal tagsi, laakiin sidoo kale waxay na siisaa degganaan dheeri ah oo maskaxeed maxaa yeelay codsigu wuxuu xaqiijinayaa inaanaan ka leexanayn meeshii aan u soconnay.
Muuqaalkan waxaa hadda laga heli karaa Hindiya oo keliya, laakiin dhowaan ayaa laga heli doonaa adduunka oo dhan. Sababta loo soo saaray dalkan maahan wax kale oo aan ahayn isku day waxay siisaa amaan ballaaran dumarka isticmaala tagaasida dalka, si ay markasta u ogaadaan inay ku wajahan yihiin halka ay u socdaan.
Khariidadaha Google aad ayey uga badan yihiin adeeg ku darista wadista baabuurka. Waxay sidoo kale ina tusaysaa kuwa ugu fiican meheradaha, dukaamada ama makhaayadaha marka loo eego dhadhanka cuntadeena, ikhtiyaar aad u fiican oo ku habboon marka aan joogno magaalo kale ama aan dooneyno inaan ka baxno wadadeena caadiga ah ee caloosha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Khariidadaha Google ayaa na soo ogeysiin doona haddii taksiilaha doonayo inuu leexdo
Sony waxay soo saari doontaa taleefan casri ah oo leh lix kamaradood oo gadaal ah iyo laba kamaradood oo hore